ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: သူငယ်ချင်း မင်း ဘ၀အတွက် စကားလေးတစ်ခွန်း လက်ဆောင်ပါ ♥♥.
သူငယ်ချင်း မင်း ဘ၀အတွက် စကားလေးတစ်ခွန်း လက်ဆောင်ပါ ♥♥.
ZOLZOL | 3:31 PM | ဗဟုသုတ
ZOLZOL | 3:31 PM |
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရှိနေချိန် ဟာ အိပ်မက်တစ်ခုဆိုရင်...ငါဘယ်တော့မှ
သူငယ်ချင်း..........အသည်း ကွဲ နေလား.....
ခံစားမှုဆိုတဲ့ ..စနက်တံကိုမီးဝိုင်း ရှို့မယ်။
သူငယ်ချင်း..........မင်းကို သူတို့ အထင်သေးနေလား....
ငါနောက် လှေ ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
မင်းဘ၀မှာ တစ်ခါမှ မရဘူးတဲ့ အရာကို လိုချင်ရင် တယ်ဆိုရင် ...
မင်းတစ်ခါမှ မလုပ်ဘူးတဲ့ အလုပ်မျိုးကို လုပ်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်...။
ဘ၀ရဲ့ ခေါ်ရာကို မလိုက်နဲ့ ...
မင်းသွားချင်တဲ့ ဆီ ဘ၀ကို ခေါ်သွား .... ။
မွေးဖွားလာလို့ ရှင်သန်နေရတာ မဟုတ်ဘူး .... ။
ဘာမှ လွမ်းဆွေး တမ်းတ နေဖို့ မလိုဘူးလေ ...
ရှေ့ကို ဆက်ပြီးလျှောက်ပါ သူငယ်ချင်း ...
နေမ၀င်သရွေ့ ဘ၀ ကို ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးနဲ့
မင်းအတွက် လိုအပ်လာတဲ့ အခါ လှမ်းခေါ်လိုက်ပါ ... အဖော်မွန်ကောင်းဆိုတာ ဘ၀မှာ
Posted by တာရာမောင်ငယ်
Posted by ZOLZOL at 3:31 PM